Absolute Hotel Service inowedzera kuenda kuLaos neEastin Hotel Vientiane
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Absolute Hotel Service inowedzera kuenda kuLaos neEastin Hotel Vientiane
Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Laos Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Press zvinoburitswa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
kumabvazuva hotera mu laos
Iyo Absolute Hotel Services boka rakazivisa hotera yekutanga muLaos kuwedzera mune yekambani portfolio. IEastin Hotel Vientiane Laos inotarisirwa kuvhura mukota yekupedzisira ya2021.
Eastin Hotel Vientiane ichave nemakamuri makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ane dzimba dze Deluxe uye masuti uye epasirese epasi ano zvivakwa zvevanyaradzo vese. Ihotera yacho inosanganisira yekudyira kwemazuva ese, yekudyira yakasarudzika, yekushambira yekunze uye yekurovedza muviri.
Vientiane ndiro guta guru uye rakakura kuguta reLaos uye zvakare nzvimbo yekushanyira vashanyi kune dzimwe nzvimbo munyika uye yakakosha hurumende nekambani yekuenda. Ihotera iri pamahombekombe erwizi rweMekong nemaonero kuyambuka kuenda kuThailand. Iyo ipfupi mota kubva kunhandare yepasi rose. Chiteshi chikuru muLaos cheiyo nyowani yekumhanyisa chitima kubva kumaodzanyemba kweChina iri padyo nehotera.
"Tinofara kuva nehotera yedu yekutanga muVientiane, Laos kuti tibatanidze mhuri yedu yeEastin, hotera yedu ichapa vashanyi mukana wekuzorora murwizi rwakasikwa apo uchingova nhanho shomanana kubva pakati peguta rine nhoroondo yetsika yakapfuma." Eastin ndeye zvese nezve kuendesa yakakura muenzi chiitiko icho chakakosha kune ese nguva. Tinotarisira kupa vaenzi vedu zvakanaka pavanosarudza kugara nesu. ” akadaro Jonathan Wigley, CEO weAbsolute Hotel Services Group.
Boeing inogadza Chief Chief Officer
KuSandals Resorts Chaunongoda rudo